Personality – DR NU MYAT THEINGI OO
ပန်းတိုင်ဆီအရောက်လှမ်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ Written by Dr.Nu Myat Theingi Oo ကိုယ်ရဲ့စိုက်ထူထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အရောက်လှမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။ ၁။ အတိအကျသတ်မှတ်ပါ။ သင်ဘာကို လိုချင်တာလဲဆိုတာ သေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ “အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း ပိုလုပ်ချင်တယ်”ဆိုတာမျိုး ဟာ ၀ိုးတိုးဝါးတားနဲ့မရေရာပါဘူး။ “တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀လောက် လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်”ဆို တာမျိုးကတော့ ပိုတိကျသေချာပါတယ်။ ၂။ ရေးမှတ်ထားပါ။ သင်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ရေးချထားတာဟာ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲ ပိုစွဲမြဲစေပြီး သင့်ကိုယ်သင် ကတိပြု ထားရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ သင်နေ့စဉ် မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ၃။ အလွယ်ကနေ စလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က တစ်နေ့ကို မိနစ်၃၀ကြာ လမ်းလျှောက်မယ်လို့ မှန်းထားပါက စစချင်းတစ်နေ့ကို ၁၀မိနစ်စာလောက်သာ လမ်းလျှောက်ပေးပါက ပိုသဘာဝကျပြီး … More How to reach your goals?
Leaveacomment How to reach your goals?
ဒီနေ့ ဘာအရောင် သုံးသင့်သလဲ ? Dr.Nu Myat Theingi Oo အရောင်တွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စိတ်ခံစားမှုတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ အရောင်တွေဟာ ကျွန်မတို့ကို အားရှိစေနိုင်တယ်။ တည်ငြိမ်စေနိုင်တယ်။ ရဲရင့်စေနိုင်တယ်။ ပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့ ကျွန်မတို့ကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိစေ နိုင်မလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံးအောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်ပြီး အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သင့် စိတ်အခြေအနေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်တွေကို ၀တ်ဆင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ အောက်ပါ စာကြောင်းတွေအနက် သင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စာကြောင်းတွေကို မှတ်ထားပါ။ ၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေပြီး လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်အပေါ် အခွင့်အရေး ယူတတ်ကြသလို ခံစားနေရတယ်။ ၂။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀မှာ မေတ္တာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို … More What color should you wear today?
Leaveacomment What color should you wear today?
ခွင့်လွှတ်ခြင်း အဆင့်(၁၀)ဆင့် Written by – Dr.Nu Myat Theingi Oo တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အမှားတွေအတွက် အဲဒီလူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ကို အံ့သြစရာကောင်း လောက်အောင် ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စေတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ ဘ၀နေထိုင်မှု အနုပညာတစ်ရပ်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လောက်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေကိုကြုံဆုံဖူးမှာပါ။ အဲဒီလိုကြုံဆုံလာတဲ့အခါတိုင်း သည်းခံ ခွှင့်လွှတ်ခြင်းဟာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေပြီး စိတ်ကိုသက်သာရာရစေကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကိုလည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေလာစေနိုင်ပါတယ်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဘ၀မှာ နာကြည်းမှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ အသက်ဆက်နေရင် ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိ တော့မှန်းကို လူအတော်များများက သတိမထားမိကြပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံမှာ … More ခွင့်လွှတ်ခြင်း အဆင့်(၁၀)ဆင့်
Leaveacomment ခွင့်လွှတ်ခြင်း အဆင့်(၁၀)ဆင့်
သင့်ခြေလှမ်းမှပြောသော သင့်အကြောင်း ————————————————————————– ဒေါက်တာနုမြတ် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခပ်မြန်မြန်လှမ်းလေ့ရှိလား ဒါမှမဟုတ် ခြေလှမ်းစိပ်စိပ်လှမ်းတတ်သလား။ သင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံ၊ ခြေလှမ်းလှမ်းပုံပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကို ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ လက်ကို များများလွှဲသလား၊ အလေးမ,ထားသလို ဒီအတိုင်းပဲ တွဲလောင်းထားပြီး လျှောက်တတ်သလားဆိုတာကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကနေပြီး သင်ရဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံလမ်း လျှောက်နည်းက သင့်ကျန်းမာရေး အကြောင်း၊ သင့်အကြောင်း ဘယ်လိုဖော်ပြနေသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ခြေလှမ်းစိပ်စိပ် လှမ်းတတ်ရင် … ခြေလှမ်းခပ်စိပ်စိပ်လှမ်းကာ လမ်းလျှောက်ခြင်းက တင်ပါးနဲ့ ပေါင်ရှိ ကြွက်သားတွေ တင်းရင်းနေတာကို ဖော်ပြနေပြီး ဒူးခေါင်းပေါ် အားပြုကာ လျှောက်နေရတာကြောင့် ကြာလာပါက ဒူးခေါင်း ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။ ခြေလှမ်းစိပ်ခြင်းက … More သင့်ခြေလှမ်းမှပြောသော သင့်အကြောင်း
Leaveacomment သင့်ခြေလှမ်းမှပြောသော သင့်အကြောင်း